E-Mandalay Imperilion - I-Airbnb
Izolile, iyimfihlo futhi yakhelwe ama-tropics, i-Mandalay Imperilion itholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka e-Nelly Bay foreshore, isiteshi sesikebhe, izitolo, izindawo zokudlela kanye namathilomu. Iklanyelwe ukuba ithathe ukukhanya futhi igcwale leli pavilion elizimele elibekwe ezingadini eziluhlaza liyindawo ekahle yokuphumula uye eholidini lakho lesiqhingi sase-Greece.
I-Mandalay Imperilion iyi-villa enamakamelo azimele afanelekela abantu abashadile, abashadile abangu-2 noma umndeni omncane, enamakamelo okulala angu-2, indlu yokugezela kabili, ingubo yokugqoka kanye nekhishi elincane. Uhlukaniswe ne-pavilion eyinhloko ngedekhi enkulu uzoba nayo yonke indawo yakho ngokufinyelela kwi-spa/indawo yokubhukuda, izingadi eziluhlaza, itafula langaphandle lendawo yokubhukuda kanye nendawo yokuwasha izingubo. Ikhishi elincane liqukethe isiqandisi sebha, i-microwave encane, kanye netiye & izindawo zokwenza ikhofi. I-pavilion inokufinyelela kwe-wi-fi, ine-air-conditioned ephelele futhi wonke amashidi ombhede namathawula okugeza anikezwa izivakashi.
Ngizotholakala phakathi nokuhlala kwakho ukukusiza nganoma yimiphi imibuzo ephathelene nendawo yokuhlala noma imininingwane ngezindawo ezithandwayo zasendaweni, ukuhamba ngezinyawo, amabhishi, izindawo zokudlela nezinto ongazenza.